I-Sheraton eNtsha yase-Djibouti ekhuphisana neKempinski kunye neAtlantic njengeehotele eziphambili
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziDilikayo zaseJibouti » I-Sheraton eNtsha yase-Djibouti ekhuphisana neKempinski kunye neAtlantic njengeehotele eziphambili
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziDilikayo zaseJibouti • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Abandwendweli base Djibouti banokuphinda bafumane eyona ndlela indala kurhwebo ngetyuwa ngelixa behamba ecaleni kweenkamela ezilayishwe "ngegolide emhlophe", kunye nokuntywila ngeWhale Shark, enye yeendawo ezinokuphakama kwaye zisondele nezi zidalwa. . Iindwendwe zingandwendwela i-Lac Assal eluhlaza eluhlaza, kwimizuzu nje engama-30 ukusuka eSheraton Djibouti, ichibi lamanzi aluhlaza litsala iingcali zejoloji kunye nezentaba-mlilo ezivela kwihlabathi liphela.
IKempinski, iAtlantic kwaye ngoku iSheraton Djibouti bakhuphisana neendwendwe kumdlalo weqonga Unxweme lwase Djibouti.
Namhlanje uSheraton ubhengeze apho- ukuvulwa emva kwesigidi seedola esityala ihotele enamagumbi ali-185 njengehotele yokuqala e-Afrika phantsi kwale Marriott Brand
Iindawo ezicingelweyo zijolise ekudaleni imeko apho iindwendwe zinokuziva zikhululekile kwaye zikhululekile, nokuba ziyasebenza, ziyadibana okanye ziyazonwabisa.
Ukuzoba kwiingcambu zayo njengendawo yoluntu ekuhlaleni kunye neendwendwe kwiindawo eziphambili kwihlabathi liphela, indlela entsha yeSheraton yenza amava anomdla kunye neendawo ezipheleleyo zokudibanisa, ukuvelisa, kunye nokuziva uyinxalenye yento.
Ifumaneka kwi-Plateau du Serpent kwi-Quarter yakudala yase-Diplomatic, ihotele ikumgama wokuhamba ukusuka edolophini yase-Djibouti kunye nemizuzu eli-10 ukusuka e-Djibouti Ambouli International Airport. I-iconic Sheraton Djibouti yayiyeyokuqala ihotele yamazwe onke ukuvula kwikomkhulu, idibanisa inkcubeko etyebileyo yase-Djibouti kunye nemigangatho yokubuka iindwendwe kwihlabathi liphela. Ihotele yamkelwa yiRiphabhlikhi yase-Djibouti kunyaka wayo wokuqala wokuvula kwaye yaboniswa kwisitampu senkonzo yeposi yonyaka. Indawo ebalaseleyo kuluntu lwasekhaya, uSheraton Djibouti ubamba iinkumbulo ezikhethekileyo kubantu abaninzi base-Djibouti abakonwabele ukutyelelwa okumnandi, iintlanganiso zosapho kunye nemibhiyozo yenkcubeko ehotele.
Kwintliziyo yeSheraton Djibouti yindawo yokwamkela iindwendwe yokuqhayisa ngento entle yekristale ebonisa imephu ye-Djibouti. Indawo yokulinda icingelwe njenge "Isikwere sikawonke-wonke" sehotele; indawo evulekileyo, evulekileyo emema abantu ukuba babe kunye okanye bathathe ixesha lokuba bodwa phakathi kwabanye, badale imvakalelo yamandla nokuba ngabakhoyo. Ngokuhamba kwendalo ngokwendalo, okunomdla, nokungahambelani, iindwendwe zinento eziyifunayo ngaphakathi kwengalo, zonke zisetelwe ngokuchasene nomqolo wokumema oziva ufudumele kwaye ukhululekile kodwa ucocekile.
ISheraton Djibouti inezinto ezininzi ezityikityiweyo zombono omtsha kaSheraton. Oku kubandakanya Itafile yoluntu, indawo yokusebenzela eyakhelwe injongo, emisa indawo yokungenisa ihotele kwaye ivumela iindwendwe ukuba zisebenze, zitye, zisele ngelixa zisusa amandla esithuba. Ukulandela ifilosofi kaSheraton yokwamkela zombini ifom kunye nokusebenza, ezi tafile zenziwe ngokwesiko kunye nezixhobo zokugcina iindwendwe zivelisa kubandakanya ukukhanya okwakhelweyo kunye neendawo zombane.
Izitudiyo ziindawo zokudibanisa eziguqukayo iyafumaneka ukubhukisha nanini na xa undwendwe luyifuna, ukuququzelela ukusebenzisana, ukunxibelelana kunye nokunxibelelana kwindawo esesikweni. Eyakhelwe kumaqonga aphakanyisiweyo kwaye afakwe kwiglasi, i-Studios evunyelweyo kubuchwephesha ivumela iindwendwe ukuba zenze igalelo kumandla esithuba soluntu ngelixa zibonelela ngasese kwaye zigxile kwiintlanganiso zamaqela amancinci okanye kumava okutya abucala.
Ukutya okutsha okunyusiweyo kunye nesiselo eSheraton Djibouti kudala indawo ekujoliswe kuyo kumava okubamba iindwendwe. Icandelo lebar, indawo yendlu yekofu kunye nenxalenye yentengiso, i Ibha yeKofu yintsika ephambili yombono omtsha weSheraton, oguqula iindwendwe ngaphandle komthungo emini nasebusuku ngeendlela zokutyela ezifumanekayo ekuhlaleni, ekulula ukuzisebenzisa ngelixa usebenza kwaye zenziwe ngokwezifiso ukulungiselela zonke izinto ozithandayo kunye neeshedyuli zexesha.
IINKONZO ZABAKHOKHUSI NEEKLABHU EZINOMDLALO WOKUQHUBA
Kumagumbi eendwendwe, aqhubeka nokuhlaziywa ngokwamanqanaba, iindwendwe zamkelwe kwindawo eqaqambileyo, ekhanyiswe kakuhle enomtsalane, nendawo yokuhlala. Ukugqitywa kokuthanjiswa kunye neetoni ezikhanyayo zomthi zincediswa zizimbo eziluhlaza kunye neturquoise eziphefumlelwe lulwandle lwase Djibouti, ngelixa iindonga zihonjiswe ngemizobo ephefumlelweyo yalapha. Amagumbi eendwendwe aphangaleleyo nangala maxesha acingelwe ngezixhobo ezitsha zemveliso, ezinje ngetshaja ze-USB kunye neephaneli zemithombo yeendaba. Iindwendwe ziyakonwabela konke ukonwaba okulindelweyo kwindawo yokuhlala yaseSheraton kubandakanya indawo yokulala yamava eSheraton kunye neeshawari zangoku zokuhamba.
Indawo eguqulweyo yeSheraton Club Lounge yindawo ekhethekileyo UMarriott Bonvoy Amalungu e-Elite kunye neendwendwe zenqanaba leklabhu yaseSheraton, kwaye zibonelela ngendawo eyamkelekileyo nephakamileyo etshintsha ngokungenamthungo kunye nemisebenzi ukusukela kusasa kude kuye ngokuhlwa. Iindwendwe ziya kufumana ukutya kunye neziphuzo ezihlaziyiweyo, izibonelelo zepremiyamu, unxibelelwano oluphuculweyo, kunye nokufikelela kwi-24/7 kwindawo yabucala.
UKWAMKELA IINDWENDWE ZOSHISHINO OKANYE ZOKUZONWABISA
Iindwendwe zinokufikelela kuluhlu lwezinto zokuzonwabisa ehotele kubandakanya iphuli yangaphandle ejonge kuLwandle oluBomvu apho iindwendwe zinokuphumla zize zidle kwindawo yokutyela engaselwandle, iKhamsin Pool Bar. Unxweme labucala lwehotele yindawo efanelekileyo yokusingatha iindibano zabucala, i-barbeque ukutshona kwelanga kunye nokonwabela imisebenzi yamanzi enje nge-kayaking kunye ne-paddleboarding. ICrystal Lounge yindawo oyithandayo kunye noluntu lwasekhaya kwaye inikezela ngokukhetha iziselo, ukutya okulula kunye nokuzonwabisa ngokuhlwa.
ISheraton Djibouti ineemitha zesikwere ezingama-327 zesithuba semisitho, kubandakanya amagumbi ama-3 eentlanganiso kunye negumbi elitsha lebhola elihlaziyiweyo elinokuhlalisa iindwendwe ezili-180. Intlanganiso yehotele yobungcali kunye neengcali zemisitho zibonelela bonke ubuchule obuyimfuneko kunye noncedo lweendibano ezinempumelelo ukusuka kwiintlanganiso zamaqela asondeleyo ukuya kwimibhiyozo emikhulu yomtshato.
U-Boumediene Ouadjed, Umphathi Jikelele e-Sheraton Djibouti, "Kuyasivuyisa ukwamkela abahambi behlabathi kunye nabahlali ngokufanayo ukuba bafumane iindawo ezintsha nezikhuthazayo eSheraton Djibouti." . Ukuma kwayo kubanzi okubandakanya amachibi etyuwa, amathafa atshonileyo kunye nemiwonyo enamatye, kuyenza ukuba ibe yindawo entle kubathandi bendalo. ”
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe nceda utyelele www.sheratondjibouti.com
I-Kuwait iyakwalela bonke abemi abangacaciswanga abavela kwamanye amazwe ...
I-nonstop San José ukuya eChicago iinqwelomoya zibuyela eMelika ...
IsiXeko saseNew York ngoku sifuna isiQinisekiso sokuGonya i-COVID ...
Ukubhabhela eZambia okanye eZimbabwe kuye kwaba nje ngokukhawuleza okukhulu ...
IBahamas ikwiNdawo elungileyo yokuZuza kwi ...
ILake Powell Ukunyamalala: Kulusizi kakhulu kukhenketho!
Ukhenketho lwasePalestine lwalahleka ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi ngenxa ...
Indawo entsha yamatyala ebhengezwe yi-ePlus
IRashiya iphinda iqale iinqwelomoya ukuya eCzech Republic, eDominican ...
I-Ukraine kunye ne-European Union batyikitya isivumelwano se-Open Skies
IiNkosana zaseAfrika zoKhenketho lweeKomikhi ziQinisa iSixeko sase ...
Ukhenketho lweCaribbean luSungula iNethiwekhi yoLuntu
IATA: Ukuntsonkotha okuninzi kwindlela umda o ...
Abahambi ngeenqanawa bayavuya ukutyelela iJamaica emva kwembini ...
Inqwelomoya yaseRussia yantlitha intaba eTurkey ibulala ...
AmaSilamsi aseThailand amkela abanquli kwakhona
Iikiti ze-ONYX zokuguqula ipetroli ukuya kwi-propane zivumela ukusika ...